तपाइले जान्नै पर्ने केहि सर्टकट किबोर्ड - Science Dialog
के तपाई कम्प्युटरमा लामो समय काम गर्नु हुन्छ? र हरेकपटक माउस चलाउँदा हैरान हुनुभएको छ ? त्यसो भए तपाईका लागि केही सहज उपायहरु छन् जसले तपाईको कम्प्युटरमा काम गराईलाई सजिलो बनाइदिने छ । कम्प्युटर किबोर्डमा यस्ता थुप्रै सर्टकट फर्मूलाहरु हुन्छन, जसले गर्दा तपाईले हरेकपटक माउस चलाउन पर्दैन, किबोर्डबाटै छिटो र सजिलोसँग गर्न सक्नुहुन्छ । माइक्रोसफ्ट विन्डोजको वर्ड, पावरपोइन्ट, एक्सेल लगायतका प्रोग्राममा यस्ता धेरै छोटकरी नम्बरहरु सेट गरिएको हुन्छ । तालिमप्राप्त र अनुभवी प्रयोगकर्ताका लागि यहाँ उल्लेखित टिप्स सामान्यजस्ता लाग्न सक्छन् । तर, नयाँ प्रयोगकर्ता र तालिम नलिइ कम्प्युटर चलाउन सुरु गर्नुभएका प्रयोगकर्ताका लागि भने यी टिप्स दैनिक जीवनका लागि निकै उपयोगी हुनसक्छन् ।
Proceedings of Fifth National Conference on Science and Technology Nov 10-12, 2008, Kathmandu
Next story प्रविधि क्षेत्रमा संसारका सबैभन्दा बढि तलब थाप्ने ८ महिला
Previous story स्मार्टफोन हरायो, चोरी भयो ? ‘किल बटन’ थिच्नुहोस् आफै पत्ता लाग्छ !